Western Digital na-ewetara ihe ọhụrụ draịvụ ike ya 12 na 14 ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Western Digital na-ewepụta draịva ike ya dị ọhụrụ 12 na 14 ọhụrụ
Western Digital katalọgụ nke diski diski SSD na-aga n'ihu na, na, na ọgbọ nke anọ a, ọ ka kwuputara ọkwa ọhụrụ edere maka azụmahịa nke ejiri aha UltraStar He12 nke nwere nkeji abụọ nke ikike dị iche iche, 12 na 14 terabytes. Dị ka ọganihu, ka m gwa gị na, opekata mpe ugbu a, mba dị iche iche ekwuputeghị ọnụahịa ọ ga-ada n'ahịa ahụ, agbanyeghị, n'ihi nghazi ya, ọ ga-abụ ihe a na-amachibidoro maka onye ọrụ ụlọ.
Ihe anyị maara bụ na abụọ ndị a Western Digital ike draịva ga kụrụ ahịa na mmalite 2017. Na-akọwapụta ntakịrị, dị ka ekwuputara, n'ikpeazụ, ụdị ikike terabyte 12 ga-adị na mbido 2017 ebe ụdị ikike dị elu ga-abịarute izu ole na ole ka e mesịrị. Banyere ihe ndị kachasị adọrọ mmasị, rịba ama na nkeji ndị a ha na-akawanye mma n’etiti 10 na 20% na diski ndị gara aga nke, n’enweghi obi abụọ ọ bụla, bụ nnukwu mmụba.
Western Digital na-abịa na 2017 n'akụkụ ọhụrụ 12 na 14 terabyte SSD draịva.
N'ime, anyị na-ahụ na draịvụ ike ọhụrụ ndị a nwere ụkpụrụ ụlọ ọhụụ nke na-enye ha ohere iji ruo 8 efere na 3,5 inch usoro. Nke a pụtara na ndị na-ahụ maka imepụta na imepụta rụpụta ihe niile dị n'ime diski ahụ. Dịka nkọwa ndị ahụ si dị, Western Digital Ultrastar He12 nwere 7.200 rpm SATA na SAS interface, 256 megabytes nke ebe nchekwa nchekwa yana njikwa ọrụ nke sitere na 7,2 na 9,8 watts.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Western Digital na-ewepụta draịva ike ya dị ọhụrụ 12 na 14 ọhụrụ
Etu esi echekwa nbudata Netflix gị na kaadị microSD
Igwe ọkụ eletrik nke Xiaomi na-arụ ọrụ ugbu a na ọnụahịa ya ga-ahapụ gị ka imeghe ọnụ gị